Umthetho Webhizinisi kanye Nommeli Webhizinisi | Inkampani Yomthetho Eklonyelisiwe
Umthetho Wezamabhizinisi kanye Nommeli Wezezimali e-UAE
Amabhizinisi anenketho yokugcina abameli abangabasiza ngemisebenzi ehlukahlukene yezomthetho. Uma udinga izinsizakalo zezomthetho noma izeluleko zomthetho ezivela kummeli uchwepheshe noma ummeli webhizinisi e-UAE, usesendaweni efanele.
Njengodokotela, abameli banda ngokwengeziwe.
Ifemu elikhulu noma elincane Lebhizinisi
Ukuqashwa kommeli omuhle onolwazi kubaluleke kakhulu kunoma yiliphi ibhizinisi eliphumelelayo
Umgomo wanoma yiliphi ibhizinisi ukususa ubungozi futhi ukhule esikhathini eside. Amasu ethu, okuhlangenwe nakho, kanye nendlela yethu yokuhlangabezana nazo zonke izindaba ezisemthethweni kungakusiza ukufinyelela lezi zinhloso. Ukuqashwa kommeli we-UAE kukuvumela ukuthi uvikele imigomo efanele inkampani yakho.
Sinikezela ngezinsizakalo zethu nganoma yiluphi uhlobo lwamabhizinisi:
Izinkampani ezingenzi inzuzo
corporations futhi nokuningi
Sesisize amakhasimende amaningi ngezinsizakalo ezahlukahlukene ongazifunda ngezansi:
Ukuhlanganiswa - Ifomu Lebhizinisi Nokwakhiwa
Isinyathelo sokuqala lapho uqala ibhizinisi ifomu elisemthethweni. Kungazixazulula izinkinga eziningi lapho wenza isinqumo esifanele noma udala ezinye lapho wenza okungalungile.
Singasiza amaklayenti ethu ukuthi akhethe amafomu angcono kakhulu asemthethweni enhlangano yawo. Sicabanga zonke izingqinamba ezibalulekile zomthetho ezifana nentela, isikweletu sakho kanye nokusebenza kahle.
Lapho unokubambisana okusha, inkontileka noma yiluphi uhlobo lwesivumelwano, udinga ukubhekela zonke izingqinamba ezingokomthetho. Lokhu kungafaka okulandelayo:
Amalungelo okuphatha nawokuvota
Ukudluliselwa Kwezintshisekelo Zobunikazi
Ukuthengwa Nokuthengiswa Kwebhizinisi
Noma ngabe uthenga noma uthengisa ibhizinisi, uzodinga izeluleko zezomthetho. Le yinqubo ebalulekile futhi kufanele ube nokulawula okwenziwayo.
Singanikeza izeluleko zomthetho zezinto ezahlukahlukene njengokuhlola ukuhola okungahle kube khona, sisize ngokuxoxisana, sihlele okwenziwayo futhi sivale isivumelwano.
Ufuna ukuqedela noma iyiphi isivumelwano ngaphandle kwezinkinga ezingalindelekile futhi sinolwazi lokukusiza kuleyo ngxenye.
Ungaxhumana nathi futhi uthole izeluleko kunoma yiluphi udaba. Uzoba nommeli onguchwepheshe kumacala ezinkampani nawezamabhizinisi kwinsizakalo yakho.
Impumelelo yebhizinisi lakho incike ezinqumweni zakho. Kulula ukuthatha izinqumo ezifanele uma unolwazi olufanele.
Uma ufuna ukuqala noma ukuthenga noma ukuthengisa ibhizinisi, unezinselelo enkantolo noma ufuna ukwenza noma yikuphi ukuxhumana nabantu nezivumelwano, kufanele uqiniseke ukuthi ungathola imiphumela emihle kakhulu.
Umsebenzi wethu uncike ekusizeni amaklayenti ethu ukuthola imiphumela ngamava kanye nomsebenzi wethu.
Uma wazi ukuthi ungazixazulula noma yiziphi izinkinga ezingokomthetho ngendlela engcono kakhulu futhi uthole izeluleko ezifanele, unokuqiniseka ukuthi uzoqhubekela phambili uthathe izinqumo ezibalulekile.
Uma ungaqiniseki ukuthi ummeli wakho angayithola ngempela imiphumela, unemiphumela ephambene.
Sithatha wonke amacala ngokungathi sína futhi sinikeza konke okusemandleni ethu kumakhasimende ethu. Ngalesi sizathu, uma udinga noma yiziphi izinsizakalo zethu, ungangabazi ukuxhumana nathi futhi usitshele inkinga yakho. Sizothola indlela yokukusiza.
Thola Abameli Abamabhizinisi Abafanele
Ummeli uzothuthukisa amandla akho okuqonda izindaba ezahlukahlukene zomthetho. Ummeli Webhizinisi Eduze Kwakho.